Maleeshiyo beeleedyo ku dagaalamay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. – STAR FM SOMALIA
Maleeshiyo beeleedyo ku dagaalamay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay maleeshiyaad kala taabacsan maamulada Puntiland iyo Galmudug, ay ka dhaceen deegaan kuyaala duleedka magaalada Gaalkacyo.
Dagaalka u dhaxeeyay labada maleeshiyo beeleed ee kasoo kala jeeda Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo ayaa ku dagaalamay deegaan lagu magacaabo Sarjimaale oo qiyaastii 40-km u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Sida aan Wararku ku heleyno dagaalka u dhaxeeyay labada maleeshiyo ayaa la sheegay in uu ka bilowday is qabsi ka dhashay dhul daaqsineed, waxaana lagu guul dareestay in arintaasi xal laga gaaro iyadoona ugu dambeyn uu dagaal sababay murankaasi.
Dagaalka dhax maray labada Maleeshiyo ee kasoo kala jeeda Puntiland iyo Galmudug ayaa waxaa ka dhashay qasaaro kala duwan, walina si dhab ah looma oga qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi.
Waxaa hada socda dadaalo ay wadaan Waxgarad kasoo jeeda deegaanka uu ka dhacay dagaalka kuwaa oo ku dadaalaya sidii looga baaqsan lahaa in uu mar kale dhaco dagaal dhax mara labada maleeshiyo ee wada degan Gobolka Mudug.
Wararkii ugu danbeeyay ee Saakay laga helaayo Deegaanka garacad oo Alshabaab ay la wareegtay
Hoolgal ay ciidamada dawlada ka sameeyeen gobalka sh/hoose oo dad badan lagu soo qab qabtay